Iivesi zeBhayibhile kumxholo: Isiphelo -> Iimfihlakalo
Yonke into ekhoyo sekukudala ithiywe igama layo, nento ayiyo umntu selisaziwa kakade; umntu akanako ukumelana nalowo womeleleyo kunaye.
Lo mbono ubhekiselele kwixesha elimisiweyo, kwaye uxhinele ixesha lesiphelo, ibe ke awuyi kuphosisa. Noba ngathi uyalibazisa, wulindele; ewe, uya kufika ngokuqinisekileyo ungenakuthintelwa nto.
Isiphelo ndasixela kwasekuqaleni; kwamandulo ndazivakalisa izinto ezizayo. Ndatsho ukuba icebo lam soze liwe, koko ndokufezekisa oko ndikumisileyo.
Likwanjalo ke nelizwi endilithethayo: alibuyi lilambatha, koko liyawufezekisa umnqweno wam, liliqaqambise icebo lam.
“Ndakwazi ndingekakubumbi esizalweni sonyoko; ndazahlulela wena ungekazalwa, ndakwalatha ukuba ube ngumshumayeli kwiintlanga.”
Ndim, mna Ndikhoyo, umgocagoci weentliziyo zabantu, nomvavanyi weengcinga zabo. Ulowo ndimvuza ngokuziphatha kwakhe, ndimdlise iziqhamo zezenzo zakhe.”
Ndinixelele ezi zinto ukuze nibe noxolo, kuba nimanyene nam. Ehlabathini niya kubandezeleka; kodwa musani ukuxhalaba, kuba mna ndiloyisile ihlabathi.”
UThixo yena akamntu; akaxoki, akaguqu-guquki okomntu. Akakufezekisi na akuthembisileyo? Akakuphumelelisi na akuthethileyo?
Kunikele kuNdikhoyo konke okwenzayo, yaye ke yena uya kuziphumelelisa izicwangciso zakho.
 Waphulaphule amacebiso, ukwamkele ukululekwa – ekugqibeleni uya kuba nobulumko. Umntu uyaceba acwangcise entliziyweni yakhe, kodwa ke licebo likaNdikhoyo eliphumelelayo. Umntu uzilahlela kuloo nto ayinqwenelayo; phofu akunani kwaukuba lihlwempu kunokuba lixoki. Obona bomi kukuhlonela uNdikhoyo; umntu owenjenjalo uyazonwabela, inkathazo ingamchaphazeli. Ivila liyakha esityeni, kodwa lingabi nako ukusa emlonyeni.
Kugqale ukulunga nobumsulwa, kuba kumzisela uxolo umntu ekugqibeleni;
UNdikhoyo uyalifezekisa icebo lakhe ngam. Kambe ke, Ndikhoyo, izibele zakho zisisimakade; ungabi sawushiya umsebenzi wezandla zakho.
Ndababona abafileyo, abakhulu kwanabanci, bemile phambi kwesihlalo sokulawula. Zavulwa iincwadi, kwaza kwavulwa nenye incwadi eneenkcukacha zobomi. Abo bafileyo bagwetywa ngokwengxelo yezenzo zabo eyayibhalwe kwezo ncwadi.
Musani ke ukuthatha isimilo sabantu beli phakade, kodwa iingqondo zenu maziguquke zihlaziyeke, nize niyivume intando kaThixo, yona ilungileyo, ikholekileyo, igqibeleleyo.
 Siyazi ke ukuba kuyo yonke imeko uThixo ubenzela okulungileyo abo bamthandayo, ababizwe ngokwenjongo yakhe. Kaloku abo wayeselebazi kwangaphambili, wabamisela ukuba babe ngumfanekiso woNyana wakhe, ukuze uNyana wakhe abe ngowamazibulo kusapho olukhulu.
 Ke kaloku nakhululwa ngesisa sikaThixo ngokholo; anikhululwanga ngemizamo yenu. Ewe, kungenxa yesisa sikaThixo. Ngoko ke akukho nto ubani angaziqhayisa ngayo, kungekho migudu yakhe nje.
1 Petros 2:8-9
 Lona: “Lilitye elikhubekisayo, ulwalwa olutyibilikisayo.” Kaloku bayakhubeka kuba bengalithobeli ilizwi; phofu ke bamiselwe loo nto kakade. Kambe ke nina niluhlanga olukhethekileyo, ababingeleli basebhotwe, isizwe esinyulu, imilowo yakwaThixo. UThixo unikhethele ukuze nivakalise isidima nesihomo sakhe. Kaloku wanibiza nisebumnyameni, wanizisa ekukhanyeni okumangalisayo.
1 Korinte 2:7-9
 Ndixela ubulumko bukaThixo obungaziwa mntu, awathi uThixo kwangaphambi kokudalwa kwehlabathi wabumisela ukuze sibe nodumo ngenxa yabo. Akubangakho namnye ke wabaphathi beli hlabathi ubazileyo obo bulumko, kuba, ukuba babebazile, ngebengayibethelelanga emnqamlezweni iNkosi enobungangamsha. Kodwa ke kunjengoko zitshoyo *iziBhalo ukuthi: “Izinto ezingabonwanga liso, nezingaviwanga ndlebe, nezingathanga qatha ntliziyweni yamntu, zezi kanye uThixo wazilungiselela abo bamthandayo.”
 Kaloku zisekuhleni kum izicwangciso zam ngani zokuba ndininike intlala-kahle ingabi bububi, ndinidalele ikamva nethemba.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Nokhalela kum, nize kundithandaza, ndize mna ndiniphulaphule. Nondifuna nindifumane, xa nindifuna ngomxhelo wonke. Ewe, ndithi ndofumaneka, ndize ke mna ndikuphelise kuni ukuthinjwa.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo. “Ndoniqokelela phakathi kwezo ntlanga ndanichitha-chithela kuzo, ndinibuyisele kule ndawo apho ndanisusa khona.” Lowo ngumlomo kaNdikhoyo.